Samuel Eto’o oo si xiiso leh kaga hadlay wararka ku saabsan ka tagista Lionel Messi ee kooxda Barcelona – Gool FM
Barcelona oo ku dhow inay la saxiixato xiddig ka tirsan kooxda Chelsea
Kooxaha illaa iyo haatan xaqiijiyey inay u soo baxeen tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda 2022-23
Kylian Mbappé oo shaaca ka qaaday in sabab la xiriirta Hooyadiis darteed uu ugu biiri rabay Koox ka ciyaarta Horyaalka Premier League
Lionel Messi & Luis Suarez oo la sheegay kooxda ay markale dib ugu midoobi karaan
Mbappé oo farriin gaar ah u diray Benzema kaddib markii uu qandaraaska u kordhiyay PSG
Madaxweynaha Bayern Munich oo ku jees jeesay xiisaha Barcelona ee Lewandowski
Miyuu Mbappé ku riyoonayaa xirishada maaliyada Real Madrid? – Xiddiga oo jawaab kulul bixiyay
Milkiilaha Man United ee Avram Glazer oo ka dhawaajiyay war aad uga farxiyay taageerayaasha kooxda
Maxaa ka soo kordhay mustaqbalka De Jong ee kooxda Barcelona, xilli xiddigan la la xiriirinayey Man United?
David Alaba oo u hanjabay Liverpool kahor finalka Champions League
Samuel Eto’o oo si xiiso leh kaga hadlay wararka ku saabsan ka tagista Lionel Messi ee kooxda Barcelona
Dajiye August 18, 2020
(Barcelona) 18 Agoosto 2020. Xiddigii hore kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Cameroon ee Samuel Eto’o ayaa si weyn kaga soo horjeestay fikrada uu Lionel Messi kaga tagayo Blaugrana.
Samuel Eto’o ayaa si aan gambasho laheyn kaga codsaday saraakiisha kooxda Barcelona inay sameeyaan wax walba oo ay Lionel Messi ugu sii heyn karaan garoonka Camp Nou.
Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa kabaha la dulmartay Barcelona oo ay ku garaacday 8-2 kulan qeyb ka ahaa siddeed dhammaadka tartanka xiisaha badan ee Champions League, taasoo ka dhigtay in Messi lala xiriiriyo inuu ka tagayo Blaugrana.
Haddaba Samuel Eto’o ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “TWA Sports” ee dalka Argantina ayaa wuxuu ku sheegay:
“Haddii uu Lionel Messi baxo, waa inaan badalnaa magaca kooxda”.
“Wax walba waa in la sameeyaa si uu Messi xirfadiisa ugu soo afjaro Barcelona, waan jeclahay Lio, Barcelona waa Messi”.
“Waxaan rajeynayaa in kuwa go’aanada gaara ay gaaraan go’aan u fiican kooxda Barcelona”.
“Waxaan had iyo jeer la doonayaa Messi waxa ugu fiican, laakiin kooxda waa Messi, hadii uu go’aansado inuu baxo waa inaan isku daynaa inaan magac cusub u helno kooxda, nasiib ayaan u laheyn inaan heysano ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda”.
Muxuu ka yiri Tababare Antonio Conte guushii weyneyd ay xalay ka gaareen kooxda Shakhtar Donetsk?
Andres Iniesta oo ka hadlay xaallada adag ay hadda ku jirto kooxda Barcelona & sida ay kaga gudbi karaan